Myanmar IT Resource Forum » DESIGNERS ZONE » » Photoshop » Photoshop CS
1 Photoshop CS on 11th April 2009, 7:47 pm
Photoshop ဆိုတာကတော့ အထူးအထွေပြောစရာမလိုပါဘူး... Photo တွေကို Edit လုပ်တဲ့
Software ဆိုတာ User တိုင်းသိကြတာပါပဲ...
အခု ဒီ Topic အောက်မှာ ကျွန်တော်သိတာလေးတွေကိုမျှဝေသွားမှာပါ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း
ပထမဦးဆုံး... File တို့ Edit တို့ Image တို့ ပါတဲ့ Bar ကို Menu Bar လို့ခေါ်ပါတယ်
သူ့အောက် bar ကိုတော့ Option Bar လို့ခေါ်ပါတယ် ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ Tool box ထဲက Tool
လေးတွေရွေးချယ်တာကိုမူတည်ပြီးတော့ သူလဲ လိုက်ပြီးပြောင်းလဲပါတယ်..နောက်ပိုင်းမှာပိုသိလာမှာပါ
Tool Box နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ Box လေးတွေကိုတော့ Palettes
Tool box ထဲကကောင်လေးတွေရဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်
အခု ပထမဥိးဆုံးအနေနဲ့ Zoom ကိုသွားလိုက်ရအောင်....
2 Zoom on 11th April 2009, 8:14 pm
Zoom ဆိုတာက တော့ ပုံတွေကို ချုံ့ ပြီးကြည့်တာတို့ ချဲ့ ပြီးကြည့်တာတို့စတဲ့ နေရာတွေမှာသုံးပါတယ်...
Tool box ထဲမှာ လက်ဝါးပုံလေးရဲ့ ဘေးနားမှာ မှန်ဘီလူးပုံလေးကိုတွေ့ ကြမှာပါ အဲဒါက Zoom Tool
ဖြစ်ပါတယ် Short cut ကတော့ z ပါ....ဒါက Zoom တစ်ခုတည်းကိုပဲ သုံးနေတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့
Short cut ပါ...တစ်ကယ်လို့ကိုယ်က Move Tool ကိုသုံးနေတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား Tool
တစ်ခုကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Zoom ကို ရွေးပြီးတော့ ကိုယ် သုံးနေတဲ့ Tool ကိုပြန်ရွေးမယ်ဆိုရင်
အဲဒီအတွက် ကတော့ လွယ်ပါတယ်....ဥပမာပေးရရင် ကိုယ်က တစ်ခြား Tool တစ်ခုခု သုံးနေတယ်ဆိုပါစို့....
ဥပမာ Horizontal Type Tool ကိုသုံးနေတယ်ဆိုပါစို့ဗျာ...အဲဒါသုံးနေရင်းနဲ့ Zoom
သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Ctrl + Space ကိုဖိထားလိုက်ရင် + Zoom ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် - Zoom
အတွက်ကတော့ Ctrl + Space + Alt ပါ....
3 Re: Photoshop CS on 10th July 2009, 12:34 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 4
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-10
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 4
Thanks ! ! ! I hope so more than you can learn me......... Haveanice day...
4 Re: Photoshop CS on 24th August 2009, 1:20 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 54
တညျနရော : ရမည်းသင်း
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-04-06
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 57
5 Re: Photoshop CS on 24th August 2009, 10:04 am
6 Re: Photoshop CS on 24th August 2009, 1:00 pm
7 Re: Photoshop CS on 24th August 2009, 4:46 pm
တညျနရော : လောကနန်းတော်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-21
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 21
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 3109
ဖြတ် ညှပ် ကပ် ရော ဘယ်လိုလုပ်လဲဟင် .. သိချင်လို့ပါ
I'm not afraid to walk this world ALONE !
8 Re: Photoshop CS on 24th August 2009, 5:40 pm
ရေးပေးပါ့မယ်ဗျာ... ကျွန်တော် စာမေးပွဲတစ်ခုရှိလို့ပါ...ရေးပေးပါ့မယ်...
9 Re: Photoshop CS on 27th August 2009, 8:37 pm
ဟုတ်ကဲ့...ကိုနေရိုင်းပြောတဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ Tools လေးတွေဆက်ရှင်းပြပါ့မယ်
ဒီ Tool လေးကတော့ ကို Select မှတ်ချင်တဲ့နေရာတွေကို Select မှတ်ပြီးတော့ Cut, Copy,
...etc ပေါ့ဗျာ..အဲ့လိုလုပ်တာမှာသုံးပါတယ်။ Short Cut key ကတော့ M ပါ။ နောက်ပြီး
Rectangular Marquee Tool နဲ့ Select မှတ်ထားတာကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်တော့ Short Cut
Key က Ctrl + D ပါ။
ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်ရှင်းပြချင်တာကတော့ Crop Tool ပါ။
သူကတော့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကိုပဲ Select လုပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်ရာမှာသုံးပါတယ်။
ကျွန်တော့် မှာ အချိန်မရသေးတာကတစ်ကြောင်း...အိမ်ကနေ သုံးရတာမဟုတ်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့်... ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းမပြနိုင်တာ
သည်းခံပေးကြပါ။ နောက်ပိုင်း ပုံလေးတွေပါ ထည့်ပေးပါ့မယ်။ လော၂ ဆယ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်ကြပါ
Crop Tool ရဲ့ Short Cut key ကတော့ C ပါ... ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသလဲဆိုတော့ ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို Ctrl + O နဲ့ Open
လိုက်ပါ...ပြီးရင် Crop tool ကိုရွေးပြီးတော့ ကိုဖြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ Area ကို Select လုပ်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Enter ခေါက်လိုက်တာနဲု့
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Area ကို Crop လုပ်ပြီးသားရပါပြီ... ဒါက ကိုယ့်လက်မှန်းနဲ့ Crop လုပ်တာပါ... Width Height ကို
ကိုယ်လိုချင်သလောက် ထည့်ပြီးတော့ select လုပ်လို့ရပါတယ်...လွယ်ပါတယ်.. စစဦးဆုံး Crop Tool ကိုရွေးလိုက်ရင် အပေါ်ဘက်က
Bar မှာ Width, Height, Resolution & pixels in/cm ရွေးတဲ့ box လေးတွေရှိပါတယ်...အဲ့ဒါလေးတွေမှာကိုယ်လိုချင်
သလောက် ဂဏန်းတွေထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပြီး Select လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ အရင်လိုမျိုးကိုယ့်လက်မှန်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲ
ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Width Height အပေါ်မူတည်ပြီး select လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
10 Re: Photoshop CS on 27th August 2009, 8:49 pm
အဟဲ .. ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့ ပြန်စမ်းလိုက်ဦးမယ် ...
11 Re: Photoshop CS on 27th August 2009, 8:56 pm
12 Re: Photoshop CS on 27th August 2009, 9:06 pm
အခုမှ တစ်ကယ့် ဖြတ်ညှပ်ကပ်လာပါပြီဗျာ..အဲ....ကြားဖြတ်ပြောမယ်နော်....နောင်တော် $ƴǩǾ
လာပါပြီဗျာ..ဖြတ်ညှပ်ကပ်.... ပထမဦးဆုံးရိုး၂ ရှင်း၂ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ကနေစပါမယ် ဟီး...
Photoshop ကနေပြီးတော့ ပုံနှစ်ပုံကို open လုပ်လိုက်ပါ... Title bar တွေကိုမချဲ့ပါနဲ့
ဒီအတိုင်းပဲထားပါ...တစ်ကယ်လို့ချဲ့ ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် F ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ချိန်နိုင်ပါတယ်နော်...
ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ် ဖြတ်ချင်တဲ့ အပိုင်းလေးကို Rectangular Marquee နဲ့ select
လုပ်ပါပြီးသွားရင် Ctrl + Alt ကိုဖိပြီး Click ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ပုံအပေါ်ကို
ဆွဲတင်လိုက်ပါ....အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ် select မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းက ဟိုဘက်က
ပုံပေါ်ကိုရောက်သွားပါပြီ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ် ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ ထည့်ထားတဲ့ပုံအပိုင်းလေးကို Move
လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့...ညာဘက်ဘေးနားက Layer ဆိုတဲ့ Box
လေးကိုသွားလိုက်ပါ...အကယ်၍ layer box မရှိရင်တော့ F7 နှိပ်ပြီးတော့ ဖော်နိုင်ပါတယ်...
ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီ့မှာ layer နှစ်ခုရှိနေပါမယ်..ပထမတစ်ခုက Background layer
ပါနောက်တစ်ခုကတော့ Layer 1 ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့၇ှိနေပါမယ်...အစ်ကို/အစ်မတို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့
ကောင်က Layer 1 ပါ အဲ့ဒီ့ layer 1 ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ...ပြီးသွားရင် Move tool
ကိုသုံးပြီးတော့ စောနက ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရပါပြီ....ဒါကတော့ ရိုး၂
ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်တာပါ...အတော်ကိုရိုးတာပါ အခုတော့ ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရေးနိုင်ဦးမယ်ဗျာ...နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးပေးတော့မယ်
13 Re: Photoshop CS on 27th August 2009, 9:25 pm
ကောင်းပါလေ့ .. ကောင်းပါလေ့ .. လာထား ဟိုပုံနဲ့ဒီပုံ ညှပ် မယ် ကပ်မယ် ..
Last edited by နေရိုင်း on 28th August 2009, 10:10 am; edited 1 time in total
14 Re: Photoshop CS on 28th August 2009, 5:35 am
$ƴǩǾ ကတော့ နောက်မှ ပဲ ပြောတော့မယ် .. လောလောဆယ်တော့ ညီ ပဲ ဆက်ရေးနော် ။။ ကောင်းတယ်ညီ .. နောက် ကျရင် အားလုံကို ပြန်စုပြီးတော့ စာအုပ်လုပ်လိုက်မယ် ..
15 Re: Photoshop CS on 29th August 2009, 4:53 pm
တားကို အချွန်နဲ့ မသွားပီ...
ကျနော် ဘာမှသိပါဘူးဗျာ... ပုံဆိုလို့ မျဉ်းတောင် ဖြောင့်အောင် ဆွဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ...
တကယ်ပါ.. ကျနော်ဘာမှ မတတ်တာ ကိုထက် လည်းသိတယ်နော်
16 Re: Photoshop CS on 29th August 2009, 9:05 pm
နောင်တော်မရေးချင်လည်းအတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူးကွယ်...စိတ်ပါမှရေးပါ..နောက်ပြီး Exam လည်းဂရုစိုက်ဦး
17 Re: Photoshop CS on 20th September 2009, 8:57 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 72
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 69
18 Re: Photoshop CS on 22nd September 2009, 10:49 am
ဒီပိုစ့်က ဘယ်သူ့တာဝန်လဲတော့ မသိဘူးဗျာ.
Topic စသွားတဲ့သူက ထွက်သွားပြီဆိုတော့ ဘယ်သူများဆက်ရေးမယ်မသိဘူး။
ကို အရူး လည်း Photoshop ကျွမ်းတယ်ဆိုတာ သတင်းရထားတယ်။
19 Re: Photoshop CS on 22nd September 2009, 6:54 pm
ဒါဆိုဝင်ရေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်လို့ဟီးး [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
20 Re: Photoshop CS on 22nd September 2009, 7:05 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 30
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-18
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 26
ရေးပေးမယ်ဆိုလည်း မြန်၂ လေးရေးပေးပါနော်..ဟဲဟဲ...ဖတ်ချင်နေပြီ...တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကြီးဗျာ...
21 Layer များကို Select ပေးခြင်း. Save ခြင်း on 14th October 2009, 2:32 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 17
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-12
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 37
အခုလို အားပေးတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ. တင်ရတာ အခက်အခဲ မရှိပါဘူး.. ကျွန်တော့် Blog လေးမှာလဲ တင်ရင်း.. ဒီဖိုရမ်လေးမှာ လည်းတစ်ခါတည်းတင်ပေးလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ.. အားနည်းချက်များရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ ကြပါဦးခင်ဗျာ..ခင်မင်စွာဖြင့် DMan ([You must be registered and logged in to see this link.] )
အခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ Layer များကို Select ပေးခြင်း. Save ခြင်းပါ…
* ကျွန်တော်တို့ Active ဖြစ်နေတဲ့ Layer ၏အပေါ်က Layer ကို Select ပေးချင်ရင် ( Alt+ ] )
* အောက်က Layer ကို Select ပေးချင်ရင် ( Alt+ [ )
* အပေါ်ဆုံး Layer ကို Active ဖြစ်ချင်ရင် ( Alt+ . ) period key
* အောက်ဆုံး Layerကို Active ဖြစ်ချင်ရင် ( Alt+ , ) comma key
ဒီအပိုင်းအထိကတော့ Layer တစ်ခုခြင်းကို Select ပေးခြင်းပါ…
*ကျွန်တော်တို့ Layer အားလုံးကို Select ပေးချင်ရင်တော့ Select >> All Layer
*ဆင်တူတဲ့ Layer ကို Select ပေးချင်ရင် ( ဥပမာ- Shape Layer အားလုံး၊
Adjustment Layer အားလုံး )ဆိုရင် Layer Palette မှာ Select ပေးချင်တဲ့
Layerတစ်ခုကို Right Click ပေါ်လာတဲ့ Menu >> Select Similar
ဒီနည်းလမ်းတွေအားဖြင့် Layer များကို Select
ပေးနိုင်ပါတယ်… တစ်ခြားနည်လမ်းသိရှိသေးရင် ကျွန်တော့်ကို
အဲနောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ပြီး Project တစ်ခုကို Save မယ်ဆိုရင်
* ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် Save မယ်ဆိုရင် ( *.PSD, *PDD ) Flie Type ဖြင့် Save ရန်…* မိမိကြိုက်နှစ်သက်ပြီဆိုပါက အခြားနှစ်သက်အဆင်ပြေရာ Flie Type ဖြင့် Save နိုင်ပါတယ်….
22 Re: Photoshop CS on 14th October 2009, 2:49 am
ကို DMan ရေ ဖိုတိုရှော့ နဲ့ပတ် သတ်လို့ ဒီအောက်က နေရာကလေးမှာ ဆွေးနွေးထား တော့ အခု ပိုစ့် ကလေးကို အဲဒီ့ အထဲကို ပေါင်းလိုက် ရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာ .. လေ့ လာတဲ့ လူတွေ လည်း အားလုံး တစ်စု တစ် စည်း တည်း လေ့ လာလို့ ရတာပေါ့ ဗျာ .. အခု လို ဖိုတိုရှော့ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆရာ တစ်ပါး ရောက်လာတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ဗျာ .. ဖိုတိုရှော့ ပညာကလေးတွေ မျွှဝေပါဦး ...
23 Re: Photoshop CS on 2nd January 2010, 3:53 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 111
တညျနရော : Myitkyina, Kalay
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-26
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 519
ဘီတူမှလဲ ဆက်မသင်ပေးကြတော့ပူး... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ကို DMan နဲ့ အိုအောတာတို့ရေ
ကျွန်တော့်လို သင်ချင်တဲ့သူတွေကလဲ စောင့်မျှော်နေကြမှာပါ။
24 Re: Photoshop CS on 2nd January 2010, 5:57 pm
ခဏတော့စောင့်ကြပါနော်...ဟီး... စာပြန်ဖတ်ရမှာမို့လို့ပါ... ၂ ရက်လောက်နေရင်ဆက်ရေးပေးပါ့မယ်...ကို DMan လည်းဝင်ရေးပေးနော်..ကျွန်တော်က ဟိုစပ်၂ ဒီစပ်၂ ပဲလုပ်တတ်တာ..ဟုတ်တိပါတ်တိဘာမှမသိဘူး
25 Re: Photoshop CS on 20th March 2010, 2:56 pm
အော်2ရက်ကအခုထိပြည့်ကိုမပြည့်နိုင်တော့ဘူး... ဒီပို့စ်ကိုစခဲ့တဲ့သူကပဲ တာဝန်ယူရမယ်နော်.. အခုတော့ ငါတစ်ယောက်တည်းသီချင်းတွေနဲ့ပဲ ဆိုနေရတော့မှာပါလား...
ပုံပြင်အသစ်တွေထပ်မပြောပါနဲ့... ... ဒီလိုညာပြီးထားခဲ့သူ...
ကဲ alt.332 ရေ .... ငါတော့ မင်းကို မ ဖို့တွေ့ပြီကွ...
(အစတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဗျာ... အားလုံးဝိုင်းပြီး ညော်ကြဦးနော်... ဒါမှ ... အခုကတော့ စာမေးပွဲလေးရှိလို့ ခွင့်လွှတ်ထားတယ်...)
26 Re: Photoshop CS on 8th April 2011, 2:32 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-04-05
အဟဲ ကျွန်တော်လည်း အနည်းငယ်ဝင်ရေးပေးမယ်နော်
ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပါပဲ ပထမဦးဆုံး Tool box ထဲမှ Polygonal Lasso Tool ရှာရမှာပျင်းတယ်ဆိုရင်
ကီးဘုတ်ထဲက L ကို နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် မိမိဖွင့်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကို mouse လေးနဲ့ လိုက်ပြီးတစ်ချက်ချင်း click ပြီးတော့ စမှတ်နဲ့ ဆုံးမှတ် ဆုံအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာ အဟဲ ဒါလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ
ပြီးရင်တော့ Tool box ထဲမှ Move Tool ကိုယူမယ်ပေါ့ဗျာ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကီးဘုတ်ထဲက V ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ မိမိထားချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံ(File>Open သို့မဟုတ် File>New ခေါ်ပြီး)ဘက်ကို မပြီးတော့ရွေ့လိုက်ပေါ့ဗျာ အဟဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ မရရင် ပြန်ပြောပြပေးပါ့မယ်ဗျာ
27 Re: Photoshop CS on 9th April 2011, 10:12 pm
gimp အကြောင်းလေးများ ဆွေးနွေးမယ့်လူမရှိဘူးလားဗျာ...
gimp က photoshop နဲ့ဆင်ပေမယ့် မတူတာလေးတွေကျတော့
CS က ဘယ် tool က gimp က ဘယ် tool ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ဆင်တယ် အဲ့လောက်ပြောပေးရင်ပဲ လုံလောက်ပါပြီ...
28 Re: Photoshop CS on 10th April 2011, 8:09 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-04-09
ကောင်းပါတယ် ကျနော် လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် CS ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သင်လာတာ Gimp ဆိုတာကို အခုမှမြင်ဖူးတယ်. စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်.. ဝေါ့ဆိုက်မှဖတ်ရသလောက်ကတော့ သူက CS ထက် features တွေနည်းနည်းများနေတာတွေ့ ရတယ်.. ကောင်းမှာပါ
29 Re: Photoshop CS